China Ukuthwala okuphezulu kokuhamba ngenqanawa Ukuqalisa iAirbag yokuPhakamisa kunye nokuLungisa ifektri kunye nabathengisi Haohang
Ukuthwala okuphezulu kokuhambisa inqanawa kwiLahlegi yokuPhakamisa nokuHlahla
Iingxowa ezi-4 ezino-1.5m dia x 15m ubude Iingxowa zomoya zingabamba ngokukhuselekileyo iitoni ezili-156 ngoxinzelelo olukhuselekileyo olusebenzayo lwe-0.08MPa ngelixa ziqengqeleka.
3 ~ 18 Imitha
10000 Piece / Pieces nganye Usuku
Ukupakisha ngolwandle isikhongozeli
Ukuqalisa ngenqanawa kunye nokuHlawula iAirbag Ngobungakanani esingabizi kunye logo
Maleko 7 ukusika umfanekiso:
Umzekelo Ukucaciswa (D × L) Ukusetyenziswa
3-maleko Ububanzi (D): Ukuhamba ngenqanawa encinci naphakathi ukuya phezulu okanye ezantsi kwindlela yokwazisa kunye nokuhambisa izinto
0.8m, 1.0m, 1.2m, 1.5m, 1.8m, 2m njl.
4-maleko Ubude (L): Kwinqanawa enkulu ukuya phezulu okanye ezantsi kwindlela yokwazisa kunye nokuhambisa izinto
Maleko-5 Ukusukela kwi-5m ukuya kwi-18m Ukuhamba ngenqanawa enkulu kunye naphakathi ukuya phezulu okanye ezantsi kwindlela yokwazisa kunye nokuhambisa izinto
Uluhlu lwama-6 okanye ngaphezulu (Ububanzi kunye nobude ungenza ngokusesikweni ngokweemfuno zabathengi) Ukuhamba ngenqanawa enkulu ukuya phezulu okanye ezantsi kwindlela yokwazisa kunye nokuxhasa iindawo eziphambili ngexesha lokusebenza
Dimension Tolerance kunye neNkangeleko:
Ubude kunye nobubanzi be-airbag yokwazisa ngenqanawa kufuneka bulinganiswe ngoxinzelelo lokusebenza olulinganisiweyo, unyamezelo oluvumelekileyo luyi-3%. Inkangeleko yangaphandle yokuhambisa i-airbag yokuhambisa ngenqanawa kufuneka ibe mpuluswa, ikhanye ngaphandle kokuqhekeka, iqamza, iileya ezahluliweyo, umhadi okanye inqaku.
I-airbag entsha yaselwandle edibeneyo yokuqalisa i-airbag yamkela ifomula ekhethekileyo yerabha. Kwaye nganye irabha kunye nelaphu lomaleko elidityanisiweyo kunye nezinye. Intloko yebhaluni yokwazisa isebenzisa izaleko ezibini ngaphezulu komzimba we-airbag. Oku kuphucula uxinzelelo lomsebenzi we-airbag kwaye kwandisa amandla e-airbag yaselwandle. Ii-airbags zethu zinokuqina, ukhuseleko, kunye nomjikelo wobomi omde. Ubomi bokusetyenziswa buphindwe kabini kuneebhegi zomoya kwimarike ngeendlela zethu zerabha ezikhethekileyo.
Uvavanyo lweSikhwama seAirbag:
Ukuqalisa ngenqanawa kunye nokuqengqeleka
I-Technique entsha yeTyhubhu yangaphakathi yokuqalisa i-Airbag ilungile ekubambeni umoya kwaye kulungile ekuPhakanyiseni nakwiDock kunye nokuKhuselwa kwesikhephe.
"Ndineenqanawa kodwa andazi ukuba ndingabukhetha njani ubungakanani beAirbag yasemanzini."
Impendulo: Ungakhathazeki .Sinamava angaphezulu kweminyaka eli-10. Ii-Pls zixelele ulwazi ngenqanawa yakho, sinokucebisa ubungakanani obufanelekileyo bakho.
2. "Ndifuna ukuzama eyakho Ingxowa yomoya yolwandle, kodwa andikaze ndiyisebenzise kwaye andazi ukuba ndiyisebenzisa njani, ungandinceda? "
Impendulo: Ungakhathazeki. Siya kuthumela incwadi yemiyalelo kunye Ingxowa yomoya yolwandle.
3. "Yintoni MOQ yakho?"
Impendulo: MOQ yethu 1PC.
4. "Kuthekani ngobomi bakho Ingxowa yomoya yolwandle? "
Impendulo: Uyilo lobomi bethu Ingxowa yomoya yolwandle yiminyaka emi-6 ukuya kweli-10
5. "Lithini ixesha lakho lewaranti?"
Impendulo: Ithuba lethu lewaranti yiminyaka emi-2. Siza kujongana nokulungiswa okanye ukubuyisela ezitsha ukuba zibonakalise ukuba yingxaki yethu esemgangathweni.
6. "Ungasinika siphi isiqinisekiso?"
Impendulo: CCS, BV njl. Isiqinisekiso siyafumaneka.
Egqithileyo Kwi-2020 entsha ye-EVA enegwebu egcwele i-fender fender
Okulandelayo: Irabha yeFender Airbags yeeTheminali zokuHanjiswa kweenqanawa
Ingxowa yoMoya waselwandle
Ingxowa yomoya yolwandle
Iibhola zomoya zasemanzini
Ingxowa yerabha yomoya
Iingxowa zomoya zamanzi
Ukuthwala okuphezulu kokuhamba ngenqanawa Ukuqalisa iAirbag ye ...
Marine Pneumatic ngerabha Fender Yokohama Uhlobo Fl ...
Ukuqina okuphezulu kweArch Type A Uhlobo V Uhlobo W Uhlobo M ...
I-Polyurea yoLusu lwe-EVA Foam ezaliswe yiDonut Fender
Ukuveliswa sawa yombhobho uxinzelelo iplagi ...
Uxinzelelo oluphezulu, iiplagi zerabha yesixhobo esinyibilikayo
Iinqanawa zeTec, China Irabha Fender, Iibhola zomoya zasemanzini, Ibhloko edibeneyo, Irabha yeFender, Inqanawa yomoya,